Basket-ball Malagasy Raikitra ny “Challenge FIBA 3x3” U 18
Nambaran’ny FMBB sy ny mpikarakara ny FIBA 3x3 eto Madagasikara tetsy amin’ny Lapan’ny Fanatanjahantena omaly alakamisy 22 martsa fa hotanterahina ny 6 sy 7 aprily ho avy izao ny “Challenge FIBA 3x3” sokajy U 18.
Rallye Malagasy FSAM Lany ho filoha faninefany i Jimmy Rakotofiringa
Tontosa omaly alarobia 21 martsa 2018 tao amin’ny foiben-toerany tetsy Ambodifilao ny fifidianana izay ho filoha vaovaon’ny FSAM na Federation du sport Automobile de Madagascar.
Rakotomamonjy Neypatraiky André sy ny kitra Malagasy Aleo hilamina sy hanaja rafitra mba hampandrosoana azy
Marina fa tonga teto amintsika ny solontenan’ny FIFA sy CAF, hoy Rakotomamonjy Neypatraiky André, mpikambana eo anivon’ny CE-n’ny FMF na Federasiona Malagasin’ny baolina kitra.
Basket “Coupe du Président” Nanomboka ny sabotsy teo any Toliara ny Play Offs
Natomboka sy nosokafana ofisialy tamin’ny sabotsy 17 martsa teo, tao amin’ny kianja mitafon’i Toliara ka haharitra hatramin’ny alahady 25 martsa ny dingana Play Offs tafiditra eo amin’ny fifaninanana fiadiana ny amboaran’ny filoham-pirenena andiany fahatelo eo amin’ny taranja Basikety Baolina.
Baolina kitra – Ligin’Analamanga Lavon’ny Elgeco Plus 2-0 ny Uscafoot
Lavon’ny ekipan’ny Elgeco Plus 2 no ho 0 be izao ny ekipan’ny Uscafoot Fivondronana ny alahady teo, teo amin’ny andro faha-7 amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ligin’Analamanga.
Baolina kitra - Amboaran'ny CAF Tafita amin’ny dingana manaraka ny FOSA junior
Tafita amin'ny dingana manaraka dia ny 1/16n-dalana bis amin’ny fiadiana ny amboaran’ny CAF indray ny ekipan'ny Fosa Juniors Malagasy avy any Boeny raha nandresy ny ekipan'ny Aspl 2000 Maorisianina 1-0 tao amin'ny kianja Rabemananjara Mahajanga izay hipoka tanteraka omaly alahady 18 martsa 2018 teo amin'ny lalao miverina.
Nanolotra amboara sy loka ho azy ireo tamin’ny alalan-dRatsimbason Andry, tale misahana ny maha-olona eo anivon’ny orinasa izy ireo omaly entina hanehoana amin’ny rehetra fa manohana ny taranja ara-panatanjahantena misy eto amintsika ity orinasam-pifandraisana iray ity. Anisan’ny notolorana izany voalohany Razafinjoelina Tahiana sy Rajaonarison Baovola izay nitondra ny fiara Sabira impreza. Teo ihany koa Solofonirina Herivonjy sy Solofonirina Sandy niaraka tamin-dRanaivoson Ralambozafy sy Ralambolanja. Nambaran-dRatsimbason Andry nandritra izany fa mendrika valisoa avokoa ny ezaka hatao rehetra hahafahana mamporisika hatrany ny mpandray anjara, indrindra fa ireo nahavitabe tahaka azy enina mianadahy mianaka ireto. Nanambara moa ny Airtel fa vonona hatrany izy ireo ny hanohana ny hetsika tahaka izao raha anisan’ny tena nahafa-po azy ireo ny RIM tamin’ity taona 2016 ity.